Fampianarana ambony :: Manahirana ny oniversite ny fepetra famoriana olona • AoRaha
Fampianarana ambony Manahirana ny oniversite ny fepetra famoriana olona
Hisokatra ihany koa ny oniversite rehetra, manomboka anio. Misy ny teboka manahirana kely ho an’ny Anjerimanontolo, toy ilay fepetra tsy fahafahana mamory olona mihoatra ny zato satria tsy vitsy ny sampam-pampianarana mandray mpianatra an-jatony maro, indrindra ny taona voalohany.
“Hodinihina mandritra ny fivoriana hatao ny handaminana ny fitsinjarana ireo mpianatra. Tohizina hatrany kosa ny fampianarana ampitain-davitra”, hoy ny fanampimpanazavan’ny tompon’andraikitra eny amin’ny Oniversiten’Antananarivo.
Hizara ny mpianatra amina sokajy maromaro sy hanome enti-mody iraisana azy ireo indray ny sampam-pampianarana hafa. Voalaza fa olana iray ihany koa ny tsy fahazotoan’ny mpampianatra, indrindra ireo efa be taona sy marefo, manoloana ny valanaretina sy ny fahafatesan’ny naman’izy ireo sasany